गृहमन्त्री निधिसँग मोदीले सोधे निर्वाचनसँग जोडेर यस्तो प्रश्न ! | suryakhabar.com
Home पु.समाचार गृहमन्त्री निधिसँग मोदीले सोधे निर्वाचनसँग जोडेर यस्तो प्रश्न !
गृहमन्त्री निधिसँग मोदीले सोधे निर्वाचनसँग जोडेर यस्तो प्रश्न !
on: ५ चैत्र २०७३, शनिबार ०८:०८ In: पु.समाचारTags: No Comments
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘अबको १० महिनाका तीनै तह केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न होला त ?’ भनी जिज्ञासा राखेका छन् । भारतमा आतंकवादसम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिन आएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिसँगको भेटमा मोदीले त्यस्तो जिज्ञासा राखेका हुन् ।
शनिबारको कान्तिपुरमा लेखिएको छ, निधिले आगामी वैशाख ३१ मा स्थानीय चुनाव र त्यसपछि क्रमशस् प्रादेशिक तथा केन्द्रीय संसदको निर्वाचन तयारी भइरहेको बताएपछि मोदीले त्यस्तो जिज्ञासा राखेका हुन् । मोदीसँगको भेटपछि कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा निधिले संविधान संशोधन तथा मधेसवादी दलहरूको मागबारे ‘स्पेसिफिक’ कुरा नभएको बताए । उनले स्थानीय चुनावका लागि आवश्यक पर्ने लजिस्टिक सहायताबारे मोदीलाई अनुरोध गरेको र सकारात्मक जवाफ पाएको बताए ।
भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र गृहमन्त्री राजनाथ सिंहसँगको भेटमा भारतीय पक्षले निधिलाई मधेसवादी दलहरूका मागलाई सम्बोधन गरेर निर्वाचनमा जान आग्रह गरेको थियो ।
निधिसँगको भेटमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले कञ्चनपुर घटनामा दुस्ख व्यक्त गर्दै त्यसको निष्पक्ष छानबिन गर्ने र दोषी पाइएमा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ‘हामी घटनाका बारेमा सत्यतथ्य छानबिन गर्छौं र दोषी पाइएमा कारबाही गर्दछौं, यसमा नेपालले चिन्ता गर्नु पर्दैन,’ मोदीको भनाइ उद्धृत गर्दै निधिले भने ।
निधिले सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री मोदीलाई जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथको भ्रमण गर्नका लागि निम्तो दिएका छन् । निधिले मोदीलाई तीन ठाउँको भ्रमणका लागि अनौपचारिक कार्यक्रमसमेत बनाउन सकिने सुझाएका थिए । निमन्त्रणालाई मोदीले निकै खुसीका साथ लिएको निधिले बताए ।
शेरबहादुर देउवाले एक वर्षमा के गरे, के गरेनन् ? यस्तो छ महत्वपूर्ण वार्षिक रिपोर्ट !
ह्वाइट हाउसले माग्यो माफी
५ चैत्र २०७३, शनिबार ०८:०८